1.Inobvisa kunhuwirira kusingafadzi kubva kuwacha kuwomeswa mukati meimba !!
2.Inobvisa chakuvhuvhu uye chisvinu kubva muchina wekuwachisa dhiramu !! (Mushure memasvondo 2-3 ekushandiswa kwemazuva ese)
3.Inobvisa hutsinye kubva padhiraina dhizaini !!
4.Inogona kushandiswa kanopfuura mazana matatu (kanokwana gore rimwe).
5.Bvisa magnesium kubva mumambure mushure mekamazana mazana matatu uye uishandise mubindu kana hari dzemaruva, nekuti yakakosha kune photosynthesis, magnesium inosimbisa zvirimwa!
Zvishandiso: Inoshandiswa sezvigadzirwa zvekubatsira pakubvisa deodorizing, kuchenesa uye sterilizing machira ekotoni, yerineni uye yekugadzira shinda.
Hoof yekukanda tepi yakasarudzika yekurasa zvinhu zvakagadzirwa neakasarudzika zvivakwa zvekushandisa pane mabhiza mahwanda. Izvo hazvina kufanana nemabhonzo achikanda mune iyo mahwanda ekukanda tepi ine yakakwira kwazvo resin zvemukati, iyo inogarisa yekupfeka kuramba. Hoof yekukanda tepi zvakare ine yakakosha kuruka pateni iyo inobvumidza kutadza kwekukanda zvinhu kune mahwanda.
Hoof yekukanda tepi nzira yekumonera uye substrate zvinhu zvinotsigira saiti yekutadza kune mahwanda pamwe nemhedzisiro yekutadza kwemadziro senge, chena mutsetse chirwere, marasha, uye matete akatsika.
Crepe elastic Bandage ine yakapfava magadzirirwo, yakanyanya kusimba uye yakanaka mweya kukwana, iyo inogona kuvandudza kutenderera kweropa uye kudzivirira gumbo kuzvimba.
1.Midziyo: 80% donje; 20% spandex
2. Kurema: g / ㎡: 60g, 65g, 75g, 80g, 85g, 90g, 105g
3.Plip: ine kana neyako clip, yakasununguka bhendi clip kana simbi bhendi clip
4.Size: kureba (kutambanudzwa): 4m, 4.5m, 5m
5. Upamhi: 5m, 7.5m 10m, 15m, 20m
6.Blastic kurongedza: imwe neimwe yakarongedzwa mu cellophane
7. Ongorora: zvakasarudzika maratidziro sezvinobvira sekukumbira kwevatengi
Tubular elastic mabhandeji ane kugona kwakanyanya uye kushanda. Iyo inogona kushandiswa pane chero chikamu chemuviri Iine yayo yakasarudzika network dhizaini uye mashandiro maitiro, inogona kuve iri padyo padyo nemurwere muviri.
• Shandisa nzvimbo dzakasiyana-siyana: Mu polymer bandage plywood yakagadziriswa, gypsum bandage, bhenji rekubatsira, compression bandage uye splicing plywood se liner.
• Runyoro runyoro, kugadzikana, kukodzera. Hapana deformation mushure mekushisa kwekushisa
Zviri nyore kushandisa, kukweva, kwakanaka uye gen-erous, hazvikanganise hupenyu hwezuva nezuva.
Iyo isina mvura pad ndiyo yechangoburwa chigadzirwa chakagadzirwa nekambani yedu, ine yakakwira isingaite kushanda, kusimba kwakanaka uye kugadzikana kweganda kunzwa.Rega iwe uve nechokwadi chekugeza.
Zvimiro: isina mvura, yakapfava, yakasununguka, inopisa kupisa
Kushanda: orthopedics, kuvhiya
Tsananguro: Isina mvura padding chigadzirwa chekubatsira chepurasita bhandiji / kukanda tepi kudzivirira ganda remurwere kubva mukukuvara kana plaster / kukanda bhandeji inosimba.
Iyo padhi isina mvura inoenderana nemapurasita emabhandeji kuti avadzivise kubva mukukuvadza ganda revarwere pavanosimbisa, rinofema zvikuru, rakasununguka, rakapfava uye rakasununguka paganda.
Zvimiro: zvakapfava, zvakasununguka, zvinopisa kupisa
Iyi crutch Uchishandisa yepamusoro-soro yakasimba-aluminium profiles, isina ngura, pamusoro peiyo oxidation yekugaya arenaceous process. Yakasimbisa iyo yepakati pombi, inopa tsigiro yakanaka.
Sponge inopupuma furo nekubatana ruoko, rega kushandisa kuve kwakasununguka, yakakosha dhizaini, inopa irinani yakachengeteka mutoro, chubhu ine rabha hosi inodzivirira iyo kukweshera kwesimbi ichideredza kukakavara uye maungira enzwi.
Antiskid rabha pamakusheni, inopa yakanaka yepasirese kugona kugona, yemukati yeTibet simbi gasket, simbisa kwavo mukurumari, inogona kugadziridzwa yakakwira, yakakodzera kukwirira kwakasiyana.